Raali Galinta Ninka: Baro sida loo sasabo raga si fudud - Cishqi
Dumar fara badan waxaa ku adag raali galinta ninka halka kuwa qaar ay xagoogda ka tahay wax fudud, hadaba sidee loo raali galiyaa ninka?
Raali galinta ninka: Sida loo sasabo ninka
Muqdisho (Cishqi) – Dumarka markeey maseeraan waa wax caadi ah in ay ninka dhahaan wixii afkooda soo qabto.
Raali galinta ninka: Markuu ninka kaa naxaaqo uma baahnid wax kale, kaliya inaad adeegsato erayada soo socdo.
Raali galinta ninka: Sida ugu fudud ee loo raali galiyo raga
Sida cad raali galinta ninka waa wax fudud, haddii aad muujiso dareen kadibna aad ku dhahdo erayo qalbigiisa soo jiidanayo.
Intaas markaad sameyso wuxuu ninka bilaabayaa inuu hadaladaada dhuuxo. Haddii fariinta ugu horeyso ee aad u qorto ku qanci waayo waxaa adkaaneyso inuu ku rumeysto. Sidaa darteed adeegso erayadaan halkaan kuugu diyaarinay.
Qish: Baro erayada raga ay jecelyihiin
Erayo Raali Galin Jaceyl Ah
Waxaa dareemeysaa waxyeello khaladkeyga ah, oo ay tahay inaan kaa raali galiyo. laga yaabee in ay goor dambe igu tahay.
Waxaan isku mashquuliyaa murugadeyda iyo dambiga aan hadda dareemayo. Waxaan jeclaan lahaa in aad iska key cafiso, nolosheyda dhabta ah.
Ma aqaano sida aan kuula dhaqmay, anigoonan wax hubsan ayaan qaatay go’aan maskaxdayda khalkhal gelinaya. Iga raali noqo fadlan.
Waxaan diyaar u ahay inaan kaa raali galiyo wiixii dhacay. Ujeedkeygu ma ahan inaan abuuro jawi kacsan, waxaase iga tan badiyay xanaaq oo kaliya.
Waxaan dareemayay maseer aad u weyn laakin waan fahmay inaan khaldanahay. Waxaan umaleyn in laguu buunbuuniyay faallooyinkeyga, ma aanan dooneynin inaan wax yeeleeyo dareenkaaga, maxaa yeelay waxaan ogahay inaad I jeceshahay.
Fadlan i cafi, ma doonayo inaan adiga ku waayo. Maxaa yeelay waxaa tahay mustaqbalkeyga. Waxaad tahay raga kan aan ka soo xushay ee maankeygu deeqay, tan kaliya ee i wareerisay ayaa ah daqiiqadii ugu horeysay ee aan wada qaadanay, waana sababta aan u sameyn doono wax walbaa si aan u helo cafiskaaga.
Aad baan kuu jecelahay. Jacaylku wuu qurux badan yahay, laakiin ma ahan mid kaamil ah, maxaa yeelay wax kasta oo nolosha ka mid ah waxay leeyihiin dib u dhac iyo hoos u dhac. Waxaana ka laabanayaa erayadii aan ku dhahay si aan kuu raali galiyo maxaa yeelay waxaan dareemayaa in aysan dhab iga ahayn.
Aad baan kuu jeclahay, iga raali noqo. Waxaan kuu balan qaadayaa in aysan markale dhici doonin, waan ogahay in aysan sahlaneyn in la rumeeysto erayada qof fashilmay.
Ma jiro eray xun oo la dhaho laakiin si khaldan uun baa loo tarjumaa. Waxaan qirayaa in wixii aan sheegay uusan ku jirin caqiido xumo, laga yaabee inaan doonayay inaan ku fahamsiiyo waxa qalbigeygu dareemayo iyo fikradaha la qaloociyay. Ha ii fahmin qalad Jaceylkeygiyow. “
Noloshu waxa ay na siisay fursad aan ku ogaanno oo aan isku jeclaano, waxaana go aan doqonnimo ah u qaatay oo aan ku fikiray inaad igu aqbali doonto daciifnimadayda had iyo jeer iga soocaysa jacaylka. I cafi, oo fursad kale i sii fadlan. “
Waxaan aaminay in waqtiga ilaalin doono gacaliyahayga maxaa yeelay wuxuu dareemay jaceyl, laakiin aad baan u qaldamay markaan ku siin waayey qiimaha iyo muhiimadda saaxiibtinimo. I cafi, gacaliye “.
Aad ayaan uga xumahay waxa dhacay, mana noolaan karaynin haddii aanan wax cafis ah iga helin, waan ogahay inaanan helin fursadda ugu yar, laakiin waan daneeyaa, waqti kastaa oo ay igu qaadato waan ku guuleysan doonaa cafiskaaga, xittaa haddii aan nafteyda ku waayayo.
Sida aan xumaan loo dareemin hadaan marwalbaa kugu dhaleeceeyo adiga, jaceylkeyga, i cafi, ma doonayo inaan ku noqnoqdo, laakiin waxaan balanqaadayaa inaan saxo dhaqankaas xun ee igu dhalinayo inaan marwalbaa saxanahay.
Waxaan dareemayaa cidlo iyo murugo, taasina waa sababta aan u qorayo sadarradan si aan kuugu sheego inaan aad kuu jeclahay oo aanan doonaynin inaan kala tagno, fadlan i cafi haddii aan si aad ah kuugu qallafsanaa ”.